5 ụlọ oriri na ọelsụ recommendedụ akwadoro na Tokyo | Akụkọ Njem
5 ụlọ oriri na ọ recommendedụ recommendedụ akwadoro na Tokyo
Mariela Carril | | ulo, Tokio
Tokio Ọ nwere aha ọma maka ịbụ obodo dị oke ọnụ mana anyị ekwuola ọtụtụ oge na ọ bụghị ya. Gbọ njem iji ruo ebe ahụ na njem nwere ike ịdị oke ọnụ mana ị nwere ike ihi ụra ma rie obere ego, na-achịkwa mmefu na-agaghị efunahụ otu ọ dropụ.
Ulo na Tokyo dị oke ọnụ karịa nke mba ndị ọzọ, yabụ ị ga-agbazite ụlọ site na ntanetị ma ọ bụ gaa na nke ụlọ mbikọ. Typedị ebe a dị mma iji zute ndị mmadụ ma nwee ahụmịhe ndị ọzọ n'ihi na n'etiti ndị mba ọzọ na ndị Japan ị ga-enweta obodo dị iche. Lee, anyị hapụrụ gị Hostlọ nkwari akụ ise akwadoro na Tokyo.
1 Khaosan Tokyo nke mbu
2 Akwụkwọ na Bed Tokyo
4 Pịa bọtịnụ
5 Sakura ellọ mbikọ
Khaosan Tokyo nke mbu
Ọ bụ ụlọ mbikọ mbụ nke ihe mechara ghọọ agbụ. Fodụrụ otu n'ime ụlọ ndị dị ọnụ ala n'obodo ahụ ya mere na ọ bụghị ma ọlị na-eme mma: nnukwu ọnụ ụlọ ihi ụra nke nwere ọtụtụ akwa na ime ụlọ ịwụ ahụ na-ekerịta ọnụ.
Ihe dị ukwuu banyere ụlọ mbikọ a bụ ebe ahụ, dị nnọọ mita site na ọdụ ụgbọ oloko, na con echiche nke osimiri Sumida site na mbara ala gị nke dị ebube. Ọ na-enye WiFi n'efu, kichin kichin na friji, ngwa ndakwa nri na ndị ọzọ, mmiri ọkụ na-ekpo ọkụ na ncha na ncha ntutu, ọrụ ịsa ahụ na igwe nke ọnụ ahịa dị n'etiti 100 na 200 yen mana na ncha n'efu, mkpọchi n'ime ụlọ ihi ụra, akwa nhicha maka ụgwọ maka 50 yen na free kọfị na tii ụbọchị niile.
Hostlọ mbikọ a awade dorms mbuaha na akwa ano. Ọnụahịa bụ 2,200 yenni anwummere, bɛyɛ $ 20. Nbanye dị n’etiti 3 na 9 elekere na elekere 11 nke ụtụtụ. Nwere ike ịhapụ akpa gị n’akwụghị ụgwọ n’ụbọchị nbanye gị ga bido n’elekere asatọ nke ụtụtụ ruo elekere asatọ nke abalị n ’ụbọchị ị ga-apụ. Gaa na ebe nrụọrụ weebụ na Bekee ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị ma lelee alaka ndị ọzọ nke agbụ ahụ.
Akwụkwọ na Bed Tokyo
Hostlọ mbikọ a Emegheri na 2015 ma di na Ikebukuro. Ọ nwere nnukwu ọbá akwụkwọ nke nwere ihe karịrị 1700 utu aha gụnyere akwụkwọ akụkọ, ndị njem nleta na egwuregwu. Ee ọ bụ ihe ndabara ọma Ọbá akwụkwọ-ụlọ mbikọ
Enyele ụfọdụ Akwa 30 na ụdị abụọ, kọmpat na ọkọlọtọ, ụlọ ịsa ahụ na WiFi. Nwere ike ịhọrọ akwa nwere ọba akwụkwọ n’azụ, a na-akpọ ha akwụkwọ mpempe akwụkwọ, ma ọ bụ akwa dị larịị nke dị ọnụ ala ma bụrụ naanị akwa ndina. Maka ime ụlọ ị na-akwụ ụgwọ 4800 yen kwa abalị ọ bụ ezie na ọ dị ntakịrị ọnụ karịa na Fraịde, Satọde na ụbọchị tupu ezumike.
N'akuku ụlọ kọmpat pagas 3800 yen. Ọnụ ego abụọ a enweghị ụtụ isi. Nwere ike ịkwụ ụgwọ na Visa ma ọ bụ MasterCard na anabataghị ego. Can nwere ike ịkagbu na-enweghị na-eri ruo ụbọchị asatọ nke ndoputa na mgbe ahụ na-eri. Ọ nwere ezigbo weebụsaịtị na Bekee.
Hostlọ mbikọ a dị na Nihonbashi ọ na-egosipụtakwa onwe ya dị ka saịtị dị nnọọ nso. Ọ dị nso na Bakurocho, Barukoyokoyama na ọdụ Kodenmacho. N'ime ime ụlọ ha akwa dị iche iche kegidere akwa ya ma nwee ọtụtụ osisi. Kwà mgbochi ahụ bụ nri, ụdị uwe ndị Japan na-ahụkarị na ụlọ nri na ụlọ ahịa. Ha na-egbochi anyanwụ, ifufe na uzuzu ma ọ bụghị mkpọtụ n'ihi ya, a na-agwa ndị ọbịa ka ha nọrọ jụụ.
Hostlọ mbikọ a na-enye a agwakọta dorm nke mmadụ asaa nwere akwa ndina maka 3000 yen kwa abalị ma ọ bụ ime ụlọ maka isii nwere otu akwa ma ọ bụ akwa abụọ maka 3500 yen. Enwere ọkụ ịgụ, WiFi n'efu, plọg na ikuku ikuku. Ime ụlọ ndị a dị na ala nke abụọ na ebe a nwekwara oghere na-enwekarị na windo. Mmiri mmiri dị na ala nke isii ma nwee mposi na ala ọ bụla. A na-ekewa mmiri na okike.
N'elu ala nke atọ enwere ime ụlọ ihi ụra na Ala 5 bụ ụlọ maka ụmụ nwanyị naanị nke nwere ike ijide mmadụ iri na asatọ n’akwa akwa maka yen 18 n’abalị. Ọrụ ndị a na-akwụghị ụgwọ gụnyere onye na-ehicha ntutu, WiFi, mmiri na-asa elekere 3.300, ncha ntutu, ncha, kichin kichin ya na arịa ya na obere igbe. Site na ịkwụ ụgwọ ị nweta otu nke ezé eze na ahịhịa, slippers, akwa nhicha, ọrụ ịsa akwa na ndị ọzọ. Ihe kachasị ọnụ bụ mgbazinye akwa nhicha ahụ maka 24 yen, ndị ọzọ bụ pennies na ndị ọzọ.
Ọnụ ụzọ mbata na-emechi na 11 pm mana ha na-enye gị koodu ịbanye site n'akụkụ ma ọ bụrụ na ị bịarute mgbe e mesịrị. N'elu ala nke mbụ, a ga-eji ọkụ dị egwu nabata gị iji zere abalị oyi nke oge oyi Tokyo.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịnọ n’ime obodo, ị ga - ahọrọ ụlọ mbikọ a emi odude ke Minato-ku. Ọ bụ otu ụlọ oriri na ọ cafụ cafụ ya mere ọ bụrụ na ị pụọ n'abalị ma teta agụụ ...
Ọ na-enye ụdị ụlọ anọ:
agwakọta agwakọta agwakọta maka mmadụ asaa a 3.500 yen kwa abalị n’onye obula.
ebe obibi nwanyi maka mmadu anọ maka otu onu ahia
a ejima maka 8000 yen kwa abalị ụlọ ahụ
ime ụlọ ime ụlọ nke abụọ maka otu ọnụahịa ahụ.
Eterlọ oriri na ọ coolụ veryụ mara ezigbo mma na-arụ ọrụ site na 8:30 am ruo 8 pm. Nbanye dị site n’elekere atọ nke mgbede ruo elekere itoolu nke abalị ma lebanye anya na elekere iri na otu nke ụtụtụ. Nwere ike ịchekwa akpa gị ruo mgbe ọpụpụ gị ma ọ bụ mbata gị na Anabataghị kaadị akwụmụgwọ. Enwere WiFi efu, kichin kichin, ime ụlọ ịwụ ahụ, igwe na-ehicha na mkpo.
Aremụaka na-anabata si 10 afọ ma ọ bụghị na ime ụlọ ihi ụra ma na ụlọ abụọ ma ọ bụ ejima.
Sakura ellọ mbikọ
Sakura na-enye họtelu na ụlọ mbikọ. Thelọ obibi ahụ dị na mpaghara Asakusa, ama ama maka ụlọ nsọ ya na n'ime ụzọ dị omimi nke Tokyo Skytree. Nwere ndị ọrụ na-asụ ọtụtụ asụsụ y ị nwere ike ịlele ruo elekere asatọ nke abalị nke dị mma.
Enyele ụdị ime ụlọ atọ ma haziri ya maka ndị njem otu na ndị njem solo. Ime ime na-efu 3000 yen akwa otu ubochi, n’erughi $ 30, o nwekwaara akwa akwa isii rue asatọ. Ha bụ dorms agwakọta. Ime ụlọ dịịrị abụọ ma dị mma maka ndị di na nwunye. Ha na-efu 8500 yen kwa abalị.
Mgbe ahụ enwere ụlọ maka otu nke akwa anọ, isii na asatọ maka ọnụahịa nke 13 puku, 18, 600 na 24, 400 yen. Ime ụlọ ọ bụla nwere ntụ oyi, ọkụ n’akwa ọ bụla, mkpọchi, plọg na WiFi. N’ụlọ nke ọ bụla nke ụlọ mbikọ ahụ, a na-enwe mmiri ọkụ na-ekpo ọkụ 24, igwe mbuli na ime ụlọ ịwụ.
N'ezie, Tokyo na-enye ọtụtụ ebe obibi ndị ọzọ, ọbụlagodi ọtụtụ gọọmenti rụrụ, mana anyị nwere olile anya na n'etiti ndị ise a bụ nke gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Tokio » 5 ụlọ oriri na ọ recommendedụ recommendedụ akwadoro na Tokyo